ခွဲစိတ်ဝတ်ရုံ, ခွဲစိတ် Pack ကို, ခွဲစိတ် Drape - Akso
ခွဲစိတ် Pack ကို & Drape
ခွဲစိတ် Pack ကို
အရိုးအထူးကု Pack ကို
သားဖွား Pack ကို Urology Pack ကို
Cardiobascular Pack ကို Angiography Pack ကို
သွားဘက်ဆိုင်ရာ Pack ကို
အာရုံကြော Pack ကို
မိခင် & Kids ဂရုစိုက်
, ဆန့်ကျင်ငြိမ်ရေစိုခံသို့မဟုတ် hydrophilic & အနိမျ့ Plus ကိုဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူအဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများ။
ဗူးထဲမှာအားလုံးအစိတ်အပိုင်းများလွယ်ကူသော traceability ။
အရည်အသွေးမြင့်မား SMMS ၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ခွဲစိတ်ဝတ်ရုံများအတွက် AAMI3အရည် Barrier နျ Standard လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
BS EN 13795. ၏စံစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တွေ့ဆုံ
အတန်းအစား 1, CFR အအပိုင်း 1610. အဝတ်အစား•အထည်အလိပ် CPSC16 ၏ Flammable များအတွက်စံနှင့်တွေ့ဆုံ
အနိမျ့ Plus ကိုများနှင့်ပွန်းပဲ့ခံနိုင်ရည်: အနာအတွက် Plus ကိုညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်ကိုလျော့ကျစေပါတယ်။
binding အနီရောင်လည်ပင်းနှင့်အတူချိန်ကိုက် neckline - ချိတ်များနှင့်ကွင်းဆက်။
Taped ချုပ်ရိုးအပြည့်အဝအရည်များနှင့်ဖုန်မှုန့် ingress ဆန့်ကျင် seam- တံဆိပ်ခတ်ဆိုလိုသည်။
အလင်းပျော့နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် finish ကိုများအတွက် co-extruded ထည်။
အပြည့်အဝ elasticity ပါးပျဉ်း, ခြေဆစ်များနှင့်လက်ကောက်နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတိုးမြှင့်ပေးထားပါသည်။
ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့်အတူညစ်ညမ်းစေခြင်းငှါမြေမှုန့်အမှုန်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက် EN1073-2 ။
ဇီဝအန္တရာယ်နှင့်ရောဂါကူးစက်အေးဂျင့်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက် EN14126 ။
အဘယ်သူ၏အဘိုးတစ်ဦးကျော်ကြားသောတရုတ်ဆရာဝန်ခဲ့အဲလစ်, Akso ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏တည်ထောင်သူ။ သူကသူ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူများစွာသောလူကကူညီပေးခဲ့လေသည်။ အစောပိုင်းကလေးဘဝ မှစ. , အဲလစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလုပ်မျှသတိမဲ့တည်ကြောင်းသူမ၏အဖိုးကနေသိခဲ့ရတယ်။
အဲလစ်တက်ကြီးထွားလာပြီးနောက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းဝငျမြားနှငျ့ Akso ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ , တိကျခိုင်မာစွာလုံခြုံ, သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်နှစ်သိမ့်အားလုံးသူမ၏အလုပ်ပူးတွဲပါပွီ။ ဤသည်အဲလစ်နှင့်သူမ၏အဖွဲ့သည်၏လိုက်စားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းကနေမှကုန်ကြမ်းရွေးချယ်ရာတွင် ...
Akso ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆေးပညာဆိုင်ရာတစ်ခါသုံး, အကာအကွယ်အဝတ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုခွဲစိတ် draps, ဝတ်ရုံ, ခွဲစိတ်ထုပ်, တစ်ခါသုံး coverall, အထီးကျန်ဂါဝန်, မကျြနှာကိုမျက်နှာဖုံး, ဖိနပ်အဖုံးအဖြစ် nonwoven တစ်ခါသုံးပစ္စည်းများ, အထူး
ပဲစင်းငုံခွဲစိတ်ဝတ်ရုံယုံကြည်စိတ်ချရသော PER ...
ခွဲစိတ်ဝတ်ရုံယုံကြည်စိတ်ချရသော performance ရပ် ...
တစ်ခါသုံး Lab ကကုတ်အင်္ကျီ Multilayer Spunbon Cleaing ...
တစ်ခါသုံးဓာတ်ခွဲခန်းကုတ်အင်္ကျီ laborato များအတွက်အသုံးများဖြစ်ပါတယ် ...
တစ်ခါသုံးအထီးကျန်ထားခြင်းဝတ်ရုံအရွယ်အစားက Universal အရည်အတွက် 50 ...
2017 All Rights Reserved @ GOODAO
ROOM တွင် 403, Block ကို B ကို, Beijingfangxiang, Guogongzhuang အလယျပိုငျးလမ်း, Fengtai ခရိုင်, ဘေဂျင်း, တရုတ်
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. အသားပေးကုန်ပစ္စည်းများ - ပူ Tags: - Sitemap.xml - amp မိုဘိုင်း
ကလေးများသည်တင့်တယ်ဝတ်ရုံ , ကလေးတွေက White ကတစ်ခါသုံး Coveralls , CP ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ Set-Up ကို Pack ကို , Foot စောင့်ရှောက်အင်္ဂတေ , ကလေးတွေကတစ်ခါသုံး Coveralls , ကလေးများတစ်ခါသုံး Lab ကကုတ်အင်္ကျီ ,